अष्ट्रेलिया ननिदाई सपना देख्नेहरुका लागि हो : प्रमोद आचार्य,विद्यार्थी,पर्थ - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १ मंसिर २०७३, बुधबार ०७:४३ |
मेलबर्न । यो समानतको बहस तीव्र भैरहेको बेला हो । त्यसमा पनि जीवन सबैको उस्तै हो तर भोगाई भने फरक फरक हुन सक्छन् । त्यसले फरक फरक अनुभवहरु दिलाउँछन् । अरुका जीवन भोगाइ र अनुभव कसैका लागि पाठ,प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन् । यही कुरालार्य मध्यनजर राख्दे हिमालयन कङ्गारुले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरुका अनुभवहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ–स्टुडेन्ट टल्कमा । त्यही क्रममा यसपटक हामीले पर्थमा नर्सिङ विषयमा स्नातक गर्दै गरेका प्रमोदा आचार्यका अनुभूतिहरु प्रस्तुत गर्दैछौं ।
मेरो नाम प्रमोद आचार्य हो ।
नेपालमा तपाईको घर कहाँ हो ?
नेपालमा मेरो घर नुवाकाटेमा पर्छ ।
म अहिले अष्ट्रेलियाको पर्थमा अवस्थित इडिथ कोवान युनिभर्सिटीमा पढ्दैछु ।
के विषय लिएर पढ्दै हुनुहुन्छ ?
म यहाँ नर्सिङ विषय लिएर अध्ययन गर्दैछु । नेपालमा नर्सिङ विषय केटी मान्छेले मात्र पढ्छन् भन्ने मान्यता छ । तर अष्ट्रेलिया र भारत लगायतका देशहरुमा नर्सिङ पढ्ने केटाहरु पनि धेरै हुन्छन् ।
तपाई आफैंले यो विषय रोज्नुभएको हो कि परिवारको छनौट ?
मेरो परिवारले कहिले पनि मलाई यो विषय पढ भनेर कर गर्नुभएन । नेपालमा पनि आफ्नै खुशीले रोजेको विषय पढें । अहिले यहाँ अष्ट्रेलियामा पनि आफैंले रोजेको विषय पढ्दैछु ।
विद्यार्थी जीवन सबै दृष्टिकोणले रमाइलो छ । जस्तो कलेजमा भेट्ने नयाँ साथीहरु । अष्ट्रेलियाकै कुरा गर्ने हे भने यहाँ विभिन्न देशबाट आएका विद्यार्थी साथीहरु एउटै कक्षामा छौं । फरक फरक भाषा,अलग अलग संस्कृति भएका देशका साथीहरु एकै ठाउँमा बसेर कुराकानी र अनुभवहरु साट्न पाउँदा छुट्टै रमाइलो हुन्छ । अनि कहिलेकाहीं लेक्चररहरुसँग पनि मित्रवत कुराकानी हुन्छ,त्यतिखेर झनै रमाइलो लाग्छ । कक्षामा साथीहरुसँग मिलेर गर्ने विभिन्न रमाइला हर्कतहरुले जिन्दगीलाई बोरिङ हुनै दिदैन ।
विद्यार्थी जीवन कतिखेर नरमाइलो लाग्छ ?
विद्यार्थी जीवनमा सबभन्दा गाह्रो भनेको आफ्नो टाइम टेबल म्यानेज गर्न हो । अष्ट्रेलियामा काम नगरि कोही बस्न सक्दैनन् । कति विद्यार्थीले त्यही काम नै नपाएर टेन्सनमा बस्न परिरहेको छ । काम पाएपछि पनि काम र कलेजको समय मिलाउँनै गाह्रो पर्छ । राति अबेलासम्म काम गरेर फक्र्यो घडीमा अलार्म लगाएर सुतनुपर्छ । कहिले काही त यति थाकिन्छ कि अलार्म त के भुइँचालो नै गए पनि थाहा पाइन्न । अनि अलार्मले उठाएपछि उठ्यो,आँखा मिच्दै कलेज गयो । कहिलेकाहीं त कक्षामा पढाएको केही बुझ्नै नसक्ने हुन्छ,निन्द्राले । हाम्रो नेपालको शैक्षिक प्रणालीका कारण पनि अष्ट्रेलियामा हामीले दुख पाएका छौं । विशेष गरि हामी स्नातक तहमा पढ्नेहरुलाय नेपालमा एसाइनमेन्ट भनेकै थाहा हुन्न । त्यसैले यहाँ समस्यामा पर्र्न सक्छन् । अनि आर्थिक समस्याका कारण पनि कहिलेकाहीं विद्यार्थी जीवन नरमाइलो लाग्छ ।
कलेजमा लभ गर्नु ठीक कि बेठीक ?
माफ गर्नुहोला यो प्रश्न नै बेठीक लाग्यो । किनभने लभ भनेको कलेजमा मात्रै गर्नुपर्छ वा हुन्छ भनने छैन । फेरि कलेजमै लभ परे पनि ठीक वा बेठीक कसरी भन्न सकिन्छ र ? दुई आत्म मिलेपछि जहाँ पनि जतिखेर पनि लभ पर्न सक्छ ।
लभ लेटर पढ्न मीठो कि लेक्चररको लेक्चर ?
अहिले त लभ लेटरको जमाना कहाँ छ र ? त्यही पनि भन्नै पर्दा मेरो विचारमा लभ लेटर नै मीठो होला जस्तो लाग्छ । हाहाहा ।
कक्षामा कस्तो बेला निदाइन्छ ?
प्राय सधैंजसो निदाइरहेको हुन्छु । अलि कडा लेक्चरर पर्यो भने वा स्लाइडमा जे छ त्यही हुबहु पढेर सुनाइरहने लेक्चरर पर्यो भने निदाउने मात्र होइन सपना नै देख्न भ्याउँछ ।
कक्षामै देखेको कुनै सपना ?
हाहाहा दाइको विहेको सपना देखेको थिएँ । म त नेपालमा दाइको विहेमा सुटेडबुटेड भएर जन्त जाँदै रहेछु । तर विहे पूरा नहुँदै साथीले ब्युँझाइ दिएर अधुरै रह्यो ।
अष्ट्रेलियाले के सिकायो ?
अष्ट्रेलियाले धेरै थोक सिकायो । नेपालमा हुँदा सिन्को नभाँच्ने मान्छेलाई मिहिनेत र काम गर्न सिकायो । पैसा के हो ? त्यसको महत्व कति छ ? कमाउन कति दुख गर्नुपर्छ सबै सिकायो । सबैभन्दा ठूलोो कुरा अष्ट्रेलियाले मलाई जिम्मेवार व्यक्ति बन्न सिकायो । मान्छेको रुप चिनायो,आफ्नै खुट्टामा उभिन पनि सिकायो ।
अष्ट्रेलियाको सकरात्मक पक्ष के पाउँनुभयो ?
अष्ट्रेलियामा ठूलो र सानो भन्ने केही हुँदैन । न जातभात न कुनै काम नै सानो ठूलो,सबै समान । यसलाई मैले अष्ट्रेलियाको सकरात्मक पक्षको रुपमा लिएको छु । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा यहाँको हरेक कुरा एउटै प्रणालीमा चल्छ,त्यो मन पर्छ ।
अष्ट्रेलियाको नकरात्मक पक्ष ?
खासै त्यस्तो केही छैन । त्यही हो आफ्नो घर परिवारबाट टाढा हुँदा यादले सताइरहन्छ । झन् चाडपर्व आउँदा मन दुखिरहन्छ । असाध्यै नरमाइलो लाग्छ ।
अन्त्यमा अष्ट्रेलिया आउने तयारीमा रहनुभएका साथीहरुलाइ के भन्न चाहनुहुन्छ ?
देखेको र सुनेको अष्ट्रेलियाको पछि लागेर नआउँनुहोस् भन्न चाहन्छु । एउटा संघर्षको मैदानमा होमिदैछु भन्ने सोचेर आउँनुहोला । किनभने अष्ट्रेलियामा पाइला पाइलामा संघर्ष गर्नुपर्छ । तर त्यो संघर्ष खेर जाँदैन । मिठो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । दुखको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले नेपालमा बसेर जति सोचेको थिएँ,त्यसको सयगुणा बढी दुख गर्दैछु । तर त्यो दुखको प्रतिफल पनि आफैंले खाइरहेको छु । त्यसैले अब त त्यसलार्य दुख जस्तो लाग्दैन,बरु अझ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अन्त्यमा अष्ट्रेलिया आउने तर्खरमा रहनुहुने सबै साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत र बधाइ भन्न चाहन्छु । हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिका अनुभवहरुलाई पनि प्राथमिकता दिएकोमा हिमालयन कङ्गारुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्रस्तुति :गोपाल सुवेदी
Previousअष्ट्रेलियाको ४५७ भिसामा अचानक मन्त्रीस्तरीय परिवर्तन,थप कडाइ गर्ने संकेत
Nextतीनै तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग तयार
अष्ट्रेलियाको सिटिजनसिप एप्रुभलमा यो वर्ष ८८ प्रतिशतले वृद्धि
२० असार २०७६, शुक्रबार ०७:३१
अष्ट्रेलियामा नर्स कसरी बन्ने ?
२७ भाद्र २०७३, सोमबार ०५:४२
अष्ट्रेलियास्थित द हिमालयन क्लबलाई कँडेल कन्सल्टेन्सीको निरन्तर साथ
३१ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०३:३९